Dalka Norway oo aqoonsan doona baasaboorka Soomaaliya bisha soo socota - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDalka Norway oo aqoonsan doona baasaboorka Soomaaliya bisha soo socota
July 13, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Kulan dhexmaray masuuliyiinta Safaarada Norway u qaabilsan Soomaaliya iyo madaxa haayada socdaalka Soomaaliya. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dalka Norway ayaa aqoonsan doona baasaboorka Soomaaliya bisha soo socota.
Laga bilaabo bisha soo socota ee Agoosto Norway ayaa aqoonsan doonta baasaboorka Soomaaliya noocyadiisa oo kala ah diblomaasi, kan shaqaalaha dowladda iyo kan dadka caadiga ah ee shacabka ah, sida maanta oo Jimce qoraal ay soo dhiggeen boggooda Twitter-ka ku sheegeen safaarada Norway ee Soomaaliya.
May 17, 2017 Madaxweynaha dowladda Puntland oo kulan la qaatay jaaliyada Puntland ee dalka Norway
January 26, 2020 Golaha wasiiradda DFS oo meelmariyay heshiis ay Norway $400 milyan ku caawinayso deyn cafinta Soomaaliya
March 7, 2020 Soomaaliya oo 30 sanno kadib deyn qaadan karta kadib markii ay iska bixisay deyntii Bankiga Adduunka
Donald Trump oo safiir cusub u magacaabay Soomaaliya
Lix qof oo ku dhimatay weerar ay Al-Shabaab ka geysatay Muqdisho
New York-(Puntland Mirror) Qaramada Midoobay ayaa si guud isugu raacday Jimcadii qaraar ah in la dhimo 1,000 askari oo katirsan ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya. Qorshahaan ayaa qayb ka ah dadaalka dheer ee [...]
Tirada dadka laga helay coronavirus gudaha Soomaaliya oo gaartay 28 qof
Garoowe-(Puntland Mirror) Maamulka waqooyiga Soomaaliya ee Somaliland ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in saddex qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus. Tan ayaa ka dhigaysa in tirada guud ee cudurka COVID-19 laga helay gudaha [...]